Tontosa tetsy Antsahamanitra ny seho « Faradoboka milay » niarahana tamin’ny tarika Ny Ainga. Seho nampitamberina sy nametraka indray ireo mampiavaka ity tarika manana ny maha izy azy ity.
Afa-po ireo nanatrika! Niainga tany am-boalohany ka hatramin’ny nifaranan’ny fampisehoana, tsapa ho nifamatotra akaiky ny tarika Ny Ainga, teny an-tsehatra, sy ny mpijery tonga tetsy Antsahamanitra, omaly, nandritra ny seho “Faradoboka milay”. Tao anatin’izay hafanan’ny fifamatorana izay no nilazan’i Luc, iray amin’ireo mpikambana mpanorina ny tarika Ny Ainga, tamin’ny mpijery, fa “ izahay tsy mahatsapa fahabangana. Ao am-ponay ary tsy misaraka amintsika mihitsy i Om-Gui na tsy eto intsony aza”. Nanamafy izany rahateo koa ny mpijery raha nanontaniany.
Tamin’ny ankapobeny, nandray ny toeran’i Om-Gui teo amin’ny fanentanana i Luc. Hainy tanteraka ilay mametraka tantara kely na fehezanteny manana endrika fanontaniana hitarihana ny saina sy ny fo amam-panahin’ny mpijery hifantoka any amin’ny maha mpanabe sy mpampiala voly ny tarika Ny Ainga sy ny zavakanto ataony.
Ireo hira nahafantarana ny tarika hatramin’izay no nitana ampaham-potoana lehibe tamin’ity fampisehoana tetsy Antsahamanitra ity. Nitamberina ry “Ilay voalohany”, “Fitia voasedra”, “Takarivan’Analamanga”, sns. Noporofoin’ny tarika Ny Ainga tamin’ireny hira ireny rahateo ny fahaizan-dry zareo mifehy ny gadona samihafa, toy ny country, bagasy, trôpikaly…
… Tsikaritra teny an-toerana fa zary fanamby ho an’ny tarika Ny Ainga ny hanohy sy hampivelatra ny efa natombok’i Om-Gui eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy fanabeazana. Ny mpankafy ihany koa, vonona ny hiara-dalana hatrany amin’ity tarika ity, raha tazanina tamin’ny fientanam-pon’izy ireo omaly. Na izany aza, mila ampiana bebe kokoa ny serasera fampahafantarana ny hetsika goavana tahaka iny. Maro ireo tsy nahalala raha tsy ora vitsy nialoha ny fampisehoana.